www.xamarcade.com » (Akhriso ) Tirada Xilibadanda Mooshinka Ka Keenay Jawaari ayaa sii Kordhaayo Sacadihi u Danbeyey
(Akhriso ) Tirada Xilibadanda Mooshinka Ka Keenay Jawaari ayaa sii Kordhaayo Sacadihi u Danbeyey
By mohamed xalane On: 17 Mar, 2018 In: Madadaalo
Waxaa sii kordhaya Xildhibaanada saxiixay iyo kuwa taageersan mooshinka laga gudbiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Xildhibaanada saxiixay iyo kuwa taageersan Mooshinka laga gudbiyay Gudoomiye Jawaari ayaa saacadihii lasoo dhaafay kulamo aan kala joogsi laheyn ku lahaa Hoteelo kuyaala Muqdisho iyo xarunta Madaxtooyada.
Sida aan ku helnay warar lagu kalsoonaan karo Xildhibaanada taageersan mooshinka kalsooni kala noqoshada Gudoomiyaha Baarlamaanka Jawaari ayaa hada gaaray 193-Xildhibaan, waxaana suurto gal ah in tirada ay intaas kasii badato.
Xildhibaano badan oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kana yimid dalka dibadiisa ayaa ku biiray mooshinka looga soo horjeeday Jawaari, waxa ayna Xildhibaanadan durba ku biireen shirarka looga soo horjeedo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Mooshinka laga gudbiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa u muuqda mid waji cusub sii galaya, waxaana dad badan saadaalinayaan in Jawaari uu meesha ka bixi doono hadii kulanka Baarlamaanka furmo lana guda galo mooshinka Baarlamaanka horyaala.
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in Gudoomiyaha Baarlamaanka uu ka niyad jabsan yahay Xildhibaanada mooshinka xilka looga qaadayo taageersan ee hada sii kordhaya.
Gudoomiye Jawaari ayaa galabta ilaa caawa kulamo la lahaa, Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo dad kale oo magac leh oo siyaasad ahaan taageersan, waxa uuna kala tashanayay sida uu u wajihi karo mooshinkan laga gudbiyay ee lagu doonayo in kursiga looga tuuro.
Gudoomiye Jawaari ayaa la sheegay in uu ka fekerayo labo arin midkood in uu iscasilo kahor inta aan mooshinka Baarlamaanka la horgeyn iyo in uu ku adkeesto in Baarlamaanka hortago loona qaado codka kalsoonida.
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaan wali la shaacin xiliga ay kulmi doonaan kana doodi doonaan mooshinkan laga gudbiyay Jawaari, waxaana suurto gal ah hadii uusan isbadal imaan in maalmaha soo socda kulanka Baarlamaanka uu furmo.